XFCE: DEBIAN 10 နဲ့ MX-Linux 19 မှာဘယ်လိုတွေတပ်ဆင်ထားသလဲ။ | Linux မှ
အပေါ် XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင် အခါအားလျော်စွာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုမှတ်ချက်ပေးသည် (4.16, 4.14, 4.12, အခြားသူများအကြား), ဒါမှမဟုတ်တချို့ပေါ်မှာ အကွောငျး မိမိအဘို့သပိတ်မှောက်, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ app ကပြောသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်.
ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် ဒါဟာဘာလဲ? y သင်မည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။။ သင်တန်း၏လက်ရှိအလေးပေး DEBIAN GNU / Linux metadistribution၎င်း၏လတ်တလော၌တည်၏ ဗားရှင်း, အ အရေအတွက်အား 10, ကုဒ်နာမည် buster။ ဘယ်လက်ရှိလည်းများအတွက်အခြေခံသည် Distro ပါ MX-Linux 19 (Ugly Duckling).
"XFCE သည် UNIX ကဲ့သို့သောစနစ်များအတွက်ပေါ့ပါးသော desktop environment တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာမြန်ဆန်စွာနှင့်စနစ်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ကိုသာအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပြီးအမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းဖြစ်သည်။". XFCE အသိုင်းအဝိုင်း (www.xfce.org)
"XFCE သည်ရိုးရာ UNIX အတွေးအခေါ်ကိုအထူးပြုပုံစံနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ခေတ်မီ desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှသင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသော application များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့သည်သီးခြားစီထုပ်ပိုးထားပြီးအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်ရေးကိုယ်တာပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ရရှိနိုင်သည့် package များမှရွေးချယ်နိုင်သည်". XFCE အသိုင်းအဝိုင်း (www.xfce.org)
1 အားလုံး XFCE အကြောင်း
အားလုံး XFCE အကြောင်း
အဆိုပါစီမံကိန်းအပေါ် Xfce စဉ်အတွင်းစတင်ခဲ့သည် 1996 တစ်နှစ်။ ၎င်း၏နောက်ပိုင်းတည်ငြိမ်သောအကိုင်းအခက်ဖြစ်ခြင်းသည်နောင်နှစ်များအတွင်းဖြန့်ချီခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ (XFCE 1998)၊ ၁၉၉၉ (XFCE2) နှင့် ၂၀၀၃ (XFCE1999).
လက်ရှိသူ၏နောက်ဆုံး တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း အဆိုပါဖြစ်ပါသည် XFCE ၄.၁၄ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဗားရှင်း ဗားရှင်း XFCE ၄.၁၄.
Xfce ၎င်းကိုဟောင်းနွမ်းသောနေရာတွင်အစားထိုးသည်၊ သို့သော်ပေါ့ပါး။ ရိုးရှင်းပြီးအလုပ်လုပ်သည် GNOME2, ခေတ်သစ်ပေမယ့်မိုးသည်းထန်စွာ, ရှုပ်ထွေးပြီးကြံ့ခိုင်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် GNOME3.
၎င်း၏အမည်ကိုကြွေးတင်နေသည်။ Xfceဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစမှာလူသိများတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံထားလို့ပါ XForms အဖြစ်များသည့်ပတ်ဝန်းကျင်။ လက်ရှိစာလုံး၏နိဒါန်းသည်မည်သည့်အရာနှင့်မှဆက်စပ်မှုမရှိတော့ပါ။ X ကိုလက်စထရောပတ်ဝန်းကျင်.
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် နှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေသော်လည်း တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ ဖြစ်ကောင်းကြောင့်အလွန်နှေးကွေးစွာ ပရိုဂရမ်မာများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏အဖွဲ့ငယ် သင်နှိုင်းယှဉ်ပြီ GNOME နှင့် KDE Plasma။ ၎င်း၏တိုးပွားလာသောကျော်ကြားမှုနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်း၏တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်ခြားနားသည်။
ထိန်းသိမ်းထားသည် စံအခြေခံအသွင်အပြင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးရန်နှင့်ကျွမ်းကျင်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်အမျှမြန်ဆန်။ ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူသည့်အပြင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပြီးလှပသည်။
၎င်းကိုလက်ရှိတွင်တည်ဆောက်ထားသည် GTK3 ကိရိယာတန်ဆာပလာ။
una ခိုင်မာသော track record သမိုင်း။
ကမ်းလှမ်းသည် အကောင်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ မြန်နှုန်း, တည်ငြိမ်မှုနှင့် configuration များအကြား။
ကျယ်ပြန့်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် ပုံမှန် Desktop Environment များစွာသော Distros ၌တည်၏။
အလွန် စိတ်ကြိုက်နှင့်ပေါ့ပါးအထူးသဖြင့် Panel နှင့် Desktop အဆင့်တွင် setting များနှင့်ဝစ်ဂျက်များ (goodies) မှတဆင့်။
GNOME applications များနှင့်အတူဇာတိသဟဇာတ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသုံးပါလို့ပဲ GTK +။ အလွန်ကောင်းစွာ run နိုင်ပါတယ်ပေမယ့် KDE Plasma applications များ အကယ်၍ ၎င်းကိုလိုအပ်သောစာကြည့်တိုက်များနှင့်အနည်းငယ်မျှသာတပ်ဆင်ထားလျှင်၊
ရိုးရှင်းသောလျှောက်လွှာဂေဟစနစ် သို့သော်ကောင်းမွန်သော application များဖြင့်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အလွန်ရှုပ်ထွေးမှု (အဆင့်မြင့်) မဟုတ်ပါ။
အသေးစားအလုပ်အဖွဲ့နှင့်အနည်းငယ်သာအဖွဲ့အစည်းထောက်ခံမှုသို့သော်၎င်းတွင်အပြည့်အဝကြီးထွားသောသုံးစွဲသူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှိသည်။
ဤမျှလောက်များစွာသောအင်္ဂါရပ်များကိုမပံ့ပိုးပါ Cinnamon သို့မဟုတ် MATE ကဲ့သို့သောအခြား midsize Desktop Environments ကဲ့သို့သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးအရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုတွင်အလွန်ကျိုးနွံသည်။
မသန်စွမ်း ပိုမိုသိရှိရန် သင်ကသူ့ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သည်
မင်းဘယ်မှာရှာတွေ့နိုင်မလဲ ဝီကီ၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းများ (အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အသုံးချခြင်းများ)အခြားအရာများအနက်၎င်း၏သတင်းနှင့်အပြောင်းအလဲများစာရင်းကိုကြည့်ပါ။ အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ရန်အောက်ပါလင့်ခ်များကိုလည်းရရှိနိုင်သည် Xfce:
XFCE အပေါ် Arch Wiki
ရွေးပါ XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်အခြား utility ကိုသို့မဟုတ်အပိုဆောင်း packages များအစုံ။
အဆုံးသည်အထိဆက်ပြောသည် လမ်းညွှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း de အလုပ်များ (Task Selector) ။
ကိုရွေးပြီး Reboot လုပ်ပါ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် Xfceတစ် ဦး ထက်ပိုသောရှိခြင်း၏အမှု၌ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင် installed နှင့်မရွေးချယ်ဘဲလျက် Lightdm Login Manager.
မှတ်စု: စမ်းသပ်ပြီးနောက် XFCE Desktop ပတ်ဝန်းကျင် ထည့်သွင်းပြီးသား၊ အပိုဆောင်းဇာတိအက်ပ်များနှင့်လိုအပ်သောပလပ်ဂင်များ ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာ -
သတိရပါ၊ တတိယ post အကြောင်းကိုစီးရီး၏ GNU / Linux Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်များ။ ပထမအကြောင်းပါ GNOME, ဒုတိယအကြောင်း KDE Plasmaနှင့်အောက်ပါအကြောင်းကိုဖြစ်လိမ့်မည် သစ်ကြံပိုး၊ MATE၊ LXDE နှင့်နောက်ဆုံး LXQT ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Entorno de Escritorio» ၏နာမအားဖြင့်လူသိများ «XFCE», အရာသည်များစွာသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်သည်အလင်းတို့တွင်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအရှိဆုံးအများဆုံး «Distribuciones GNU/Linux»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » XFCE: DEBIAN 10 နဲ့ MX-Linux 19 တွေမှာဘာတွေထည့်သွင်းထားသလဲ။
Kali Linux 2020.1 သည်အပြောင်းအလဲအချို့နှင့်အတူရောက်ရှိလာပြီး၎င်းတို့ထဲ၌ login ပါဝင်သည်